मध्यरातको बाढीले बगायो खुसी – shubhabihani
Home / रास्ट्रिय खबर / मध्यरातको बाढीले बगायो खुसी
मध्यरातको बाढीले बगायो खुसी
Posted by: admin in रास्ट्रिय खबर July 17, 2017	Comments 62 Views
२ साउन, काठमाडौं । रामेछापको लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर–६, साँघुटारकी कृष्णा तामाङ श्रीमान् र छोरीलाई बाढीले बगाएपछि गहिरो पीडामा छन् । श्रीमान् र छोरीलाई सम्झँदै कृष्णा छिन–छिनमै रुन्छिन् ।दिउँसो परिवारसँगै बिताएका कृष्णाका श्रीमान् अशोक भनिने विमान तामाङलाई शनिबार राति छोरीसँगै बाढीले बगाएर बेपत्ता बनाएको छ ।
विमानले पुरानो जस्ताले छाएको टहरामा पानी चुहिने भएपछि दिउँसो प्लास्टिक थपेका थिए । उनको परिवारले दुई लाख रुपैयाँमा एक रोपनी खेत बन्धकी कमाउँदै आएको छ । विमानले खेतबाट मकैसमेत भाँचेर ल्याएका थिए । साँझ खाना खाएपछि भने उनी छट्पटाइरहेका थिए । राति करिब ९ बजेदेखि नै पानी दर्किएको थियो । उनी भने आफूलाई धेरै गर्मी भएको भन्दै भित्र–बाहिर गर्दै थिए ।
छिमेकीले ‘सधैं पर्ने पानी हो, डराउनुपर्दैन अब सुत्दा हुन्छ’ भने पनि उनले मानेनन् ।
राति १ बजेतिर घरमाथि रहेको कुलोमा भेल बढेपछि घरभित्र पनि पस्यो । उनले श्रीमतीलाई ‘कुलो ठूलो आएजस्तो छ, पानी मार्न खोलामा जानुपर्यो’ भने । कृष्णाले भने केही नगर्ने भन्दै सुत्न भनिन् । तर, उनले बाहिर सुतिरहेकी १३ वर्षीया छोरी मनिलालाई आफूसँग जान जिद्धि गरे ।
उनले खोलामा गएको केही समयपछि छोरालाई फोन गरेर ठूलो बाढी आएको सुनाउँदै आमालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न भभने । उनले आफूहरू बाँसघारीमा आइपुगेको जानकारी गराए । ‘हामी उठेर छिमेकीको घरमा गयौं तर श्रीमान् र छोरी लामो समय फर्किएनन् । हामी आत्तियौं’, कृष्णाले गहभरि आँसु पार्दै भनिन्, ‘छिमेकीहरू त्यसतर्फ जानुभयो तर बाँसघारी नै बगाइसकेको रहेछ । हामीलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न लगाउनुभयो तर उहाँ र छोरीलाई बाढीले बगायो ।’
एक छोरा र चार छोरीसहितको तामाङ परिवार गाउँमा जग्गाजमिन नभएपछि फर्पुबाट १८ वर्षअघि खिम्ती बजारमा झरेको थियो । टाउको र पेटको बिरामी कृष्णालाई अर्को साता उपचारका लागि राजधानी लैजाने तयारी थियो । ‘घर बनाएको पैसा अर्को साता आउँछ, त्यसपछि काठमाडौंमा उपचारका लागि लैजाउँला, अहिलेलाई जसोतसो बसौं,’ श्रीमान भनेको सम्झना गर्दै कृष्णाले भनिन्, ‘अब मलाई कसले उपचार गराउला ? बरु छोरीको साटो म आफैं जानुपर्ने रहेछ । म त बिरामी छु, थलिएर मरौंला तर यो बालबच्चाको पालपोषण कसले गर्छ भन्ने चिन्ताले धेरै सताएको छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
Previous: बीपी सडकमा रातमा गाडी चलाउन रोक
Next: एमाले ‘मण्डले र खोक्रो राष्ट्रवादी’, कांग्रेस–माओवादी ‘सम्झौतावादी’
येसरी पक्राउ परे दीपक मनाङ्गे
त्रिभुवन विमानस्थलमा यसरी विदाइ गरियो प्रधानमन्त्रीलाई
प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवलाई भने-राजनीतिक मजाक नगर्नुस्, अलि बढ्ता भो
एनसेलले लाभांश लैजाँदा मुलुक १८ अर्बले घाटामा
जुकाको चुसाइबाट जटिल रोगको उपचार ! जुकाको र्‍यालमा एक सयभन्दा बढी यस्ता तत्त्व हुन्छन्, जसले रगतलाई शुद्ध र पातलो बनाउँछ ।
मेक्सिकोमा भएको गोली हानाहानमा १६ जनाको मृत्यु
जबरजस्ती करणीपछि महिलाको हत्या प्रयास गर्ने युवक पक्राउ
अत्यधिक रक्तश्रावबाट सुत्केरीको मृत्यु फाल्गुन २४, २०७४रासस
सोलुखुम्बु — सुत्केरीलाई बचाउने सोलु अस्पताल फाप्लुका चिकित्सकको प्रयास असफल भएको छ । बुधबार सुत्केरी व्यथा ...